ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အခြေပြု ဂဟေဆက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
Web Admin	2019-08-13 11:13:49
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြု အခြေခံဂဟေဆက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)ဖွင့်ပွဲကို သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ၆၂ လမ်း၊ ၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း ပညာဒါနဆောင်၌ ကျင်းပသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင်၊...
Web Admin	2019-05-14 14:58:26
၁။ မန်တလေးလြှပျစဈဓါတျအားပေးကျောပိုရေးရှငျး(ရုံးခြုပျ) Call Center တှငျ လြှပျစဈဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးရေးလုပျငနျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွညျသူလူထု၏ သိရှိလိုသော မေးမွနျးမှုမြားအား အခြိနျမီပွနျလညျ ဖွကွေားပေးနိုငျစရေေး Hot Line နံပါတျ(၁၆၁၆)ကို ၂၃-၄-၂ဝ၁၉ ရကျနမှေ့စ၍ တပျဆငျအသုံးပွုလကျြရှိပါသညျ။ ၂။ အဆိုပါ Hot Line နံပါတျ...
Web Admin	2019-01-15 10:59:31
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ရက် မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်၏ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခြင်း(၅)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါ ကောလိပ်တွင် ကျင်းပရာ ဟောပြောပွဲများ၊ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်များဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်။ အခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်
Web Admin	2019-01-09 11:36:15
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်များဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး...
မှတ်ပုံတင်မဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ စီမံချက်ကာလပြီးလျှင် ဥပဒေအရ ယာဉ်ကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းအရေးယူမည်
Web Admin	2018-11-14 10:46:52
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် မှတ်ပုံတင်မဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နှင့် လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို OSS စီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စီမံချက် ကာလပြီးသွားပါက မှတ်ပုံတင်မဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ဥပဒေအရ ယာဉ်ကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။...